FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA KELY - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika kely
Sary natolotry ny LSC Ranch, tranon'i 'Boxers Miniature an'ny LSC'
Betsaka ny mpiompy miteraka izay antsoin'izy ireo hoe Miniature Boxer. Na dia maro aza ny mpiompy no manana ny endriny manokana momba izay miditra amin'ny fototarazon'ny alika, dia toa manana tanjona iray daholo izy rehetra ary izany dia ny fisehoan'ilay alika ho toy ny kinova kely amin'ny Boxer purebred. Ny sasany nahomby kokoa noho ny sasany tamin'ny andrana nataony.
Ny mpiompy sasany dia miteraka tsotra fotsiny ny Boston Terrier nifangaro tamin'ny Boxer . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany rehetra ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Misy aza ny tranga izay tsy ananan'ny Boxer akory ilay Boxer ao aminy, ohatra, ny sasany dia miampita ny Rat Terrier miaraka amin'ny Pug ary miantso azy hoe Mini Boxer. Ny sasany miantso an'io fangaro io a Puggat .
Ohatra iray hafa ny hazo fijalian'ny Pug miaraka amin'ny Toy Fox Terrier. Ny sasany miantso an'io fangaro io a Poxer kilalao .
Ny sasany kosa dia miasa mafy kokoa amin'ny famoronana purebred vaovao, manoratra fari-pahaizana ary misoratra anarana. Ireto alika manokana ireto dia voalaza fa manana Boxer 50% farafaharatsiny. 25% Ny mpanao ady totohondry dia azo raisina ho toy ny tahiry fitomboana, raha mbola ampiasaina hamboarina ho an'ny isan-jato avo kokoa. Afaka manana hatramin'ny 25% izy ireo Pug , 25% Beagle , ary hatramin'ny 50% Boston Terrier , tsy mihoatra ny 50% totalin'ny Pug, Beagle ary Boston natambatra. Ny karazany hafa dia mety ho tafiditra ao aoriana koa hanitatra ny dobo filokana.
Sary natolotry ny LSC Ranch, tranon'i 'Boxers Miniature an'ny LSC' - 'Izaho dia miasa amin'ny fakana ny Miniature Boxer hatrany ary manandrana manao azy ho tena karazany fa tsy hybrid.'
alika mpiandry kaokazy amidy
sarin'alika alika yorkie
jack russell terrier cocker spaniel mifangaro
jack russell mix dane be
amerikana bulldog afangaro amin'ny bullmastiff